Beeraleyda Jaadka Kenya oo ka hadlay tallaabadii lagu joojiyay duulimaadyada Soomaaliya - Awdinle Online
Beeraleyda Jaadka Kenya oo ka hadlay tallaabadii lagu joojiyay duulimaadyada Soomaaliya
Ganacsatada beeraleyda ah Jaadka ee Kenya ayaa ka doonaya dowladdooda iney si buuxda usoo celiso xiriirkii siyaasadeed ee ay la laheyd dowladda soomaaliya si ay dib ugu bilaabaan inay Soomaaliya u soo dhoofiyaan Jaadka.
Guddoomiyaha ururka ganacstada Jaadka ee Nyambene, Kimahi Munjuri ayaa sheegay in go’aanka lagu xirey duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya isaga kala gooshi jirey ay tahay ra’yi qaldan, sida uu qorey wargeyska Daily Nation.
Ganacsatada jaadka ee Kenya ayaa maalin kasta u soo diri jiray Soomaaliya qaad fara badan iyagoo ka heli jiray dhakhli aad u bada si ay noloshooda ugu maareeyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqdey iney soo celisay xiriirkii ay la laheyd dowladda Kenya, balse uusan qeyb ka aheyn in la qaado xayiraadda saaran Jaadka.
Kenya ayaa toddobaadkii hore joojisay duuliimaadyadii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, waxaana tallabadaas wax laga xumaado ku tilmammtay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleMeydka Wariye Axmed Xuseen Cadoow oo la aasay
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray sugida Amniga Imtixaanaadka Shahaadiga